▷ 🎮 Uhambo Olufushane 【Buyekeza Futhi Ulande ✅】 - 【Ukuqhathanisa】 2022
🎮 Uhambo olufushane 【Buyekeza futhi ulande ✅】
Ngentelezi emnandi nenhle, i-A Short Hike iyi-vignette ekhangayo mayelana nenjabulo yokuhamba ngezinyawo nokuhlangana nabangane abasha.
I-A Short Hike Digital Nature Walk ikhumbula injabulo yokwelula imilenze yakho emizileni. Indawo yayo enemibala egqamile igcwele izinto ezibukwayo kanye nemisindo evamile emaphandleni empilweni yangempela, njengokugeleza komfula ohamba kancane ehlathini noma ukwamukela abanye abaqwali njengoba behamba emahlathini, emaphethelweni aphakeme emathafeni anotshani. Njengomuntu osemusha waseCanada ogama lakhe linguClaire, omunye wabalingisi bokuqala ozohlangana nabo ixoxo elilingana nepinki ogwini lolwandle e-Hawk Peak Provincial Park, elilwela ngokusobala ukwakha isigodlo sesihlabathi. Inkinga yakhe, ngeshwa, ukuthi usebenzisa ifosholo eliwusayizi ogcwele, ithuluzi eliyinkimbinkimbi elingafaneleki ukwenza umsebenzi omuhle wokuqopha isihlabathi. Ungamnika ifosholo lokudlala futhi, ngokuhamba kwesikhathi, ubuke isigodlo sakhe esiphansi esiphansi kancane kancane siphenduka umbuso wesihlabathi ovundile - umbono omuhle nje, okhazimulayo.
Lesi esinye sezigcawu zemizuzu eminingi ozosithola ku-A Short Hike, isihloko sokuhlola mayelana nokuhamba endaweni eguquguqukayo nezindlela ezinodaka zepaki. Umdlalo onomgomo olula noyedwa: Uhambo oluya phezulu kwe-Hawk Peak Mountain, ngoba ukuphela kwendawo enomakhalekhukhwini. Yize kuzwakala kuncane, miningi imisebenzi ozoyidinga ukuze uhlale umatasatasa ukuze ufike phezulu. Ungakwazi ukuqoqa amagobolondo asolwandle nezinti endleleni, usize abanye abahamba ngezinyawo ngezinkinga zabo, noma uphonsa ihhuku lakho emifuleni evilaphayo ngethemba lokubamba inhlanzi engavamile. Ukwenza lokhu kuvame ukuletha imivuzo, kungakhathaliseki ukuthi kuyisimo sezimpaphe zegolide, enye yezinto ezibaluleke kakhulu emdlalweni, noma amathuluzi ahlukahlukene kanye nezinsiza. Nakuba ezinye zazo ziyizimonyo nje kuphela, ezinye zivulela uClaire amakhono amaningi, njengekhono lokugijima, ukundiza uye phambili, noma ukugxuma ezitshalweni ezinhle zesiqhingi.
Kuyalinga ukucabanga ngazo njengezicelo eziseceleni okufanele ziqedwe, kodwa lokho kwehlula injongo yalokhu okuhlangenwe nakho - inzuzo yangempela ijabulela ubuhle obuphelele balezi zikhathi ezingavamile. Lokhu akulona neze iphutha lokulandisa; Yilezi zibonelo ezincane ezifingqa ubukhulu bokunqamula izintaba ezinkulu ze-A Short Hike. Ukusebenzelana nezinye izivakashi, njengokulandela uhambo lomdwebi oshisekayo lokuthola ugqozi emvelweni, umzamo ongeke ukwazi ngisho nakule ndawo ekhangayo, ngokuvamile kuholela eziphethweni ezithinta inhliziyo. Okunye ukuhlangana nakho kuholela kuma-anecdotes athule ahlekisayo, okufana nehlaya langasese akhumbula ukwabelana ngalo nabangane abaseduze.
Uhlu lwegeyimu lwezinhlamvu zabalingisi be-anthropomorphic nalo luyintokozo, kusukela kumalungu ashisekayo eklabhu yokugibela yabahlali ukuya komunye umqwali olahlekelwe imvume yakhe yokukhempa ngenxa yenhlanzi elambile. Kodwa-ke, ukuthola izinto ezicashile emahlathini e-oki aluhlaza naphakathi kwezakhiwo ezingasasebenzi kujabulisa kakhulu kunalezi zigcawu. Kunentokozo eyiqiniso nehlangene ekutholeni amasayithi afana nechibi elingenalutho, i-lighthouse engashiyiwe noma ezinye zezitshalo nezilwane ezinhle zesiqhingi.
Ngesikhathi esifanayo, uClaire, inyoni enekhono ngokukhethekile, wenza ukuzulazula kuleli paki kube umoya. Uhambo olufushane lukugcina kulula - amakhono akho amaningi ancike ezimpapheni ezisagolide ezishiwo ngenhla, ezisebenza njengohlobo lwebha yokuqina ekuvumela ukuthi wenze ukuqondisa kwakho ngokunambitheka okwengeziwe. U-Claire akakwazi nje ukuhamba emizileni ngezinyawo zakhe, kodwa uyakwazi nokundiza, ukuntanta, nokubhukuda, kanye nokuqwala ngisho namawa aphakeme njengenyoni encane eshisekayo. Ngisho nokushelela usuka entabeni ende akulimazi kakhulu kunokuzazisa okulimele futhi mhlawumbe imizuzu embalwa yokumoshakala kwemizamo.
Ekhuphukela phezulu futhi enza ukugxuma okukabili emoyeni ngalezi zimpaphe ezifiselekayo, ukunyakaza kuka-Claire okuthuthukisiwe kumvumela ukuba azulazule ngokukhululekile endaweni emagebhugebhu yepaki, ukuhlola okukhuthaza ngempela futhi kumvumela ukuthi enze kanjalo ngejubane lakhe. Ngenkathi ukufika esiqongweni seNtaba i-Hawk Peak kudinga inani lezimpaphe, sibonga ukuthi zingatholakala ngezindlela eziningi ezahlukene: ngaphandle, ezishuthekwe ezindaweni ezihlala ezindaweni ezihlala abantu abaningi, noma zidayiswa ngenani elilinganiselwe ukusuka edolobheni. noma umdayisi osolisayo nonobungane. Sekushiwo lokho, awujeziswa ngokungaphelele ocwaningweni lwakho. Ngisho noma ungekho esimweni sokuhlola, kungenzeka ukuqoqa izimpaphe ezanele ukuze ufike phezulu ngokwenza umsebenzi othile futhi uzimbe njengomcebo ongcwatshiwe.
Ukuze kuhambisane nokukhishwa kwe-A Short Hike ku-Nintendo Switch, umthuthukisi u-Adam Robinson-Yu ubuyekeze igeyimu ngokuqukethwe okusha. Ukuthuthukiswa kuhlanganisa ukuhamba ngomkhumbi olwandle oluphakeme epaki ngesikebhe esisha sha. U-Claire angakwazi ukushayela lo mfana omubi ngokulahlwa okusendle, esebenzisa injini yakhe ethuthuke kakhulu ukuze agijime emanzini azungezile kanye netheku eziqhingini eziseduze. Kungukuthuthuka okwamukelekayo kusukela ekubhukudeni ibanga elide ukusuka olwandle ukuya kolwandle futhi kunikeza enye indlela yokubona izinhlangothi ezengeziwe ze-Hawk Peak. Ungaphinda uchithe isikhathi nomngane omusha: osemusha onesithukuthezi, ofuna injabulo ethembisa ukukuphelezela njengoba unqamula ipaki. Ukusebenzisana noClaire kumnandi ngempela futhi kungenze ngamamatheka isikhashana.
Imidlalo eminingi ivamise ukufisa ukunikeza okwengeziwe, kwesinye isikhathi ihweba ngokweqile okudidayo, kungaba ngesenzo se-octane ephezulu noma ngezindaba ezinkulu, eziqinile ezikubeka endaweni yobuqhawe. Kodwa yizindaba ezincane nolwazi lwansuku zonke lwe-A Short Hike olunikeza igeyimu umuzwa wayo oduduzayo kanye nowokwelusa. Kumayelana nokufuna inhlanganyelo ethule nemvelo njengoba wenza uhambo lwakho lokukhuphukela phezulu, noma uthole ukugcwaliseka ngenkathi udlula ezindaweni ezincane, ezinhle kakhulu. Uphakamisa ukuthi ngisho nezithombe ezincane kakhulu nezingavamile zingajabulisa njengama-universe amakhulu kanye nezindaba zegeyimu ezifisa kakhulu. Njengoba ngiqala olunye uhambo lokuhamba ngokukhululeka ngemva kokukhuphukela esiqongweni se-Hawk Peak, angikwazi ukuzibamba kodwa ngivuma ngokuphelele.
Thwebula Uhambo olufushane